“Waxaan 130 Km uga imaadaa in aan Waxbarasho helo”+Sawirro – Radio Muqdisho
“Waxaan 130 Km uga imaadaa in aan Waxbarasho helo”+Sawirro
Dugsiyada Waxbarashada ee Degmadda Doolow Soomaaliya ayaa intooda Ardayda Dhigata waxaa badan kood soo jeedaan Qoysas Danyar ah oo isugu jira kuwo ka soo barakacay gudaha Dalka iyo qaar ka mida ah Qaxootigii ka soo laabtay Dalalka Kenya iyo Ethopia oo aanan awoodin in ay Caruurtooda ka bixiyaan waxbarashada.
Nuur aadan Xasan waa Agoon SHAN IYO TOBAN jir ah kana yimid meel u jirta Degmada Doolow 130 km waxaana u sharaxayaa Sababta keentay degaanka uu had ku sugan yahay.
“Waxaan u baahanahay Waxbarasho waxaana Masaafadaas dheer u soo maray sidii aan iskuulka u iman lahaa”
Deeqo Abshir waa macalimad dhinaca Farshaxanka ah una shaqaya Hay’ada WFP waxayna ardada ka caawisaaneysaa arimaha Sawir gacmeedka.
C.Cismaan Dhakad iyo Axmed Daahir Xasan oo ah Maamulayaasha Dudsiyadda H/dhexe Qansaxley iyo Kabaase ayaa labadooda waxay sharaxayaan Xaalada Waxbarashada ee Doolow.
“Runtii Ardayda waxaan siinaa Cashiro loogu talo galay in aan ku soo dhisno maskaxdooda si-ay uga badbaadaan inay ku dhacdo Waxbarasho la’aan”
Cabdullahi Xuseen Sheekh oo ka tirsan Masuuliyiinta WFP ahna u qaybsanaha arimaha Cuntada ardada logu siiyo Dugsiyada ayaa tilmaamaya Fa’iidada ay u leedahay.
Degmadda Doloow Soomaaliya ee Gobolka Gedo ayaa waxay ka mid tahay Deegaanada ugu badan ee ay ku soo Barakaceen Dadka ka soo cararey Dagaalada iyo Abaaraha.
Magaalada Balad Xaawo oo Hormar dhanka Ganacsiga iyo Amaanka ah Sameysyay+Warbixin
Dowladda Soomaaliya oo soo dhoweysay dadaalka lagu dhex dhexaadinayo Soomaaliya iyo Imaaraadka.